Published April 27, 2021 at 9:25 PM CDT
Degmada Woodbury waxay ku dartay saddex kiis oo cusub oo fayraska ah, taasoo wadarta kiiskeeda ka dhigaysa 15,006, sida laga soo xigtay Waaxda Caafimaadka Degmada Siouxland. Heerkiisa wanaagsan ee 14-maalmood ee imtixaannada wuxuu ahaa 3.75%. Saraakiisha caafimaadku waxay yiraahdeen wax ka sarreeya 5% waa walaac. Degmada Caafimaadka ayaa soo warisay in 12 bukaan la dhigay cisbitaalka shalay midkood MercyOne Siouxland Medical Center ama UnityPoint Health - St. Luke's, oo aan waxba laga badalin Axadii. Laga soo bilaabo galabnimadii shalay, 24,790 qof oo ku nool Gobolka Woodbury ayaa qaatay labada tallaal ee tallaalka laba-tallaal ah, halka 2,885 kalena ay heleen tallaal hal-qaadasho ah, sida lagu sheegay tirakoobka gobolka. Taasi waa ku dhowaad 27% dadweynaha gobolka.
Guddi Aqalka ah ayaa ansixiyay sharci ka mamnuucaya ganacsiyada Iowa, iskuulada, iyo xarumaha dowladda in loo diido soo gelitaanka dadka aan qaadan tallaalka 'Covid'. Intaas waxaa sii dheer, dhammaan hay'adaha dowladda ee Iowa waxaa laga hor istaagi doonaa inay soo saaraan kaararka aqoonsiga ee taariikhda tallaalka qofka.
Degmada Iskuulka Bulshada ee Magaalada Sioux waxay kaqeybqaadi doontaa Barnaamijka Adeegga Cuntada Xagaaga, bilaabanta Juun 7 waxayna soconeysaa ilaa 30ka Julaay, iyadoo goobaha qaarna ay cunayaan ilaa Agoosto 13. Meelaha waa la xiri doonaa July 5. Cuntooyinka waxaa la heli doonaa Isniinta ilaa Jimcaha kharashka carruurta da'doodu tahay 1-18. Cunug walba wuxuu heli doonaa cunno fudud oo quraac ah iyo jawaan qado ah oo lagu cuno meel ka baxsan goobta.
Gobolka Iowa wuxuu ku daray shan dhimasho oo dheeraad ah sababo la xiriira dhibaatooyinka COVID-19 iyo in ka badan 400 kiis oo cusub, oo ay ku jiraan 18…